ဝင်ဘလေကွင်းထဲက ခြင်္သေ့ပြာတပ်သားတွေနဲ့ မြေခွေးပြာတပ်သားတို့ရဲ့ စီးချင်းထိုးပွဲ – MyMedia Myanmar
ဝင်ဘလေကွင်းထဲက ခြင်္သေ့ပြာတပ်သားတွေနဲ့ မြေခွေးပြာတပ်သားတို့ရဲ့ စီးချင်းထိုးပွဲ
ဒီနေ့ညမှာတော့ ဥရောပရဲ့ ထိပ်သီး အမှတ်ပေးလိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့အတူ ဗိုလ်လုပွဲတစ်ခုကလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒါကတော့ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေမှာ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အက်အေဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ ဗိုလ်လုပွဲပါ။ ဒီတစ်ကြိမ် ဗိုလ်လုပွဲမှာတော့ နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ အက်အေဖလား ဗိုလ်လုပွဲကို မကြာခဏ တတ်လှမ်းလာလေ့ရှိတဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ့ အက်အေဖလား ဗိုလ်လုပွဲကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အကြာမှ ပြန်လည်တတ်လှမ်းလာခဲ့တဲ့ လက်စတာအသင်းတို့ ထိပ်တိုက်ယှဉ်ပြိုင်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit : We Ain’t Got Not History
ချယ်လ်ဆီးကတော့ သောမတ်စ်တူဟယ်လ် ကိုင်တွယ်ချိန်မှာပဲ ယခင်ကထက် ပိုကောင်းမွန်တဲ့ အသင်းတစ်သင်းဖြစ်လာခဲ့ပြီိး အဓိကတော့ ခံစစ်ပိုင်းမှာ Clean Sheet တွေ အတော်လေး ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အထိကို ခံစစ်ကျစ်လစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တိုက်စစ်ပိုင်းက အရမ်းထက်မြက်လာတာ မဟုတ်ပေမယ့် တိုက်စစ်ကစားသမားတိုင်းကတော့ ဂိုးသွင်းယူနိုင်တဲ့ အရည်အသွေးတွေ ရှိကြပါတယ်။ တူဟယ်လ်ကလည်း ချယ်လ်ဆီးအသင်းအတွက် ပထမဆုံးသော ဆုဖလားအဖြစ် အက်အေဖလားကို အရယူပေးချင်မှာလည်း သေချာပါတယ်။
Photo Credit : Marca
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ဆောက်သမ်တန်တွေကို ကျော်ဖြတ်လာခဲ့တဲ့ လက်စတာကတော့ လက်ရှိမှာ ဗာဒီရဲ့ ခြေစွမ်းကျဆင်းလာပေမယ့် အီယန်နာချိုက ခြေစွမ်းပြနေနိုင်ပါတယ်။ လက်စတာက တန်ပြန်တိုက်စစ်တွေ အားကောင်းပြီး လျှော့တွက်လို့ မရတဲ့ အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ခံလူ အီဗန်စ်က ဒီပွဲကို ပါဝင်ဖို့ မသေချာသေးပဲ ဖြစ်နေတာက လက်စတာအတွက် ခံစစ်ပိုင်း အနည်းငယ် ထိခိုက်နိုင်ပေမယ့် ယူနိုက်တက်ကို ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အနိုင်ရထားခဲ့လို့ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းက အားကောင်းနေမှာ သေချာပါတယ်။
အသင်း(၂)သင်းလုံးစီမှာ ဆတူအခွင့်အရေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားကြပေမယ့် ချယ်လ်ဆီးကတော့ ကစားသမားပိုင်းရော နည်းပြပိုင်းမှာပါ လက်စတာထက် အားသာနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး မနှစ်ကလည်း အက်အေဖလားဖိုင်နယ်ကို ရောက်ပြီးမှ အာဆင်နယ်ကို ရှံးထားခဲ့ရတာကြောင့် ဒီနှစ်မှာ မဖြစ်မနေ အနိုင်ကစားပြီး သူတို့အသင်းအတွက် နဝမကြိမ်မြောက် အက်အေဖလားကို အရယူနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းလာပါလိမ့်မယ်။ လက်စတာကလည်း ဒီရာသီကို ဖလားတစ်လုံးနဲ့ ရာသီသိမ်းနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းလာမှာဖြစ်ပေမယ့် ပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံပိုရှိတဲ့ ချယ်လ်ဆီးသာ ချန်ပီယံဖြစ်သွားမယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
The post ဝင်ဘလေကွင်းထဲက ခြင်္သေ့ပြာတပ်သားတွေနဲ့ မြေခွေးပြာတပ်သားတို့ရဲ့ စီးချင်းထိုးပွဲ appeared first on MySport Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-05-15T15:00:54+06:30May 15th, 2021|MYSPORT MYANMAR|
မန်ယူထက် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် (သို့) ဘာစီလိုနာအသင်းတွေကိုသာ ပြောင်းရွှေ့ချင်နေတဲ့ ကာမာဗင်ဂါ
ဝါရင့်ခံစစ်မှူး အယ်ဒါဝီရယ်ကို ကာတာကလပ်အသင်းဆီ ရောင်းချသွားဖို့ သဘောတူညီခဲ့တဲ့ စပါး
လာကာဇက်ကို ရောင်းထုတ်ပြီး အေဘရာဟမ်ကို ပြန်လည်ခေါ်ယူသွားမယ့် အာဆင်နယ်အသင်း
ဒီရက်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲ သူရဲ့အနာဂတ် အခြေအနေကို ဆုံးဖြတ်ဖွယ်ရှိနေတဲ့ ရော်နယ်ဒို
ပီအက်စ်ဂျီမှာ နေရာပျောက်နိုင်တဲ့ ကင်ပမ်ဘေကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ချယ်လ်ဆီး
အနာဂတ် မရေရာတော့တဲ့ ဘာနာဒိုဆေးဗားကို အသက်လက်တီကိုနဲ့ အာဆင်နယ်တို့ ပစ်မှတ်ထားနေ
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ကနေ ထွက်ခွာဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်တဲ့ ပေါလ်ပေါ့ဘာ
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ နောက်ဆုံးရ မနက်ခင်း ဘောလုံးသတင်းများ (24.7.2021)
ချယ်လ်ဆီး လူငယ်ကစားသမားလေးကို (၄)နှစ်စာချုပ်နဲ့ ခေါ်ယူလိုက်တဲ့ ဘရန့်ဖိုဒ့်အသင်း
ဝိုင်နယ်ဒန်ရဲ့ နေရာမှာ အစားထိုးဖို့အတွက် ဖရန့်ကတ်ဆီးကို ပစ်မှတ်ထားလာခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလ်
ဂရီးလစ်ချ်ရဲ့နေရာကို ကန့်ဝဲလ်နဲ့ အစားထိုးဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ အက်စ်တွန်ဗီလာအသင်း
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အပြီးသတ်နိုင်တော့မယ့် ချာကာနဲ့ ရိုးမားအသင်းတို့ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့
© Copyright 2017 - | MyMedia Myanmar | All Rights Reserved | Advertise with us
error: Alert: Copyright © 2021. MyMedia Myanmar